Xperia 1 II မှာ သုံးလာမယ့် Camera Specs ပေါက်ကြားလာပြီ
Sony 1 II မှာ အသုံးပြုလာမယ့် 12MP ကင်မရာ ၃ လုံး အချက်လက်တချို့ ပေါက်ကြား
2020 အတွက် အဖွင့်လှသွားတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ Sony တစ်ယောက်၊ မိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ ကြက်ပျောက်၊ ငှက်ပျောက် လုပ်သွားသလို COVID ကလည်း တောက်လျှောက် မွေနေလို့ ဘယ်တော့ ထွက်မလဲ? နောက်ပြီး ဘယ်လောက် တန်ဖိုးနဲ့ ရောင်းချသွားမလဲကိုပါ ဖွင့်ဟခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
Sony ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာ မော်ဒယ်ပဲထုတ်ထုတ် ဝင်ငွေအနှုတ်ပြနေဆဲ ဖြစ်သလို အထူးသဖြင့် Flagship ဖုန်းတွေရဲ့ ကင်မရာဟာ တခြားအလုံးတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့် Sony ကတော့ Sony ပါပဲ၊ ကျနော် တစ်ခါက ဖော်ပြဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးလို Xperia နည်းပညာတွေနဲ့ ဦးမော့နေနိုင်တယ်။ ခက်တာက အရည်သွေး မကောင်းဘူးဆိုတာထက် လူတွေအစွဲမှာ ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ တန်ဆိုရင် သူနဲ့တန်တဲ့ Quality ရှိရမယ်။
အထူးသဖြင့် ကင်မရာပိုင်းမှာ Sensitive ဖြစ်ကျတဲ့အတွက် DxOMark ပေတံနဲ့ တိုင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ကျတယ်။ အဲ့မှာ ဂွမ်းသွားတာ Sony Flagship ဖုန်းတွေဟာ DxOMark ရလာဒ် မကောင်းတဲ့အတွက် တန်းတူဖုန်းတွေနဲ့ မယှဥ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
First Cinematography Capable Smartphone
အဲ့ဒါကြောင့် One Mark II မိတ်ဆက်တဲ့အချိန် ကင်မရာ Functionality ပိုင်းကို ဦးစားပေးပြခဲ့သလို Impression ရသွားအောင် Alpha Series ကင်မရာ တွေမှာသုံးတဲ့ ZEISS Lens နဲ့ ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တယ်။ ကျေနပ်စရာ အချက်က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Cinematography ရိုက်နိုင်တာပါ။
Sony ကတော့ Burst Mode နဲ့ရိုက်ရင် 20fps (Frame per Second) နဲ့ ရသလို Auto Focus နဲ့ Auto Exposure Time ကို ၁ စက္ကန့်မှာ အကြိမ်ရေ ၆၀ နှုန်း တွက်ချက်နိုင်တယ်။ အဲ့သလို Function ပိုင်း အားသာချက်တွေ ထုတ်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ဘာ Lens အတိကျ ပြောရရင် 12MP ၃ လုံးသုံးတာ မှန်ပေမယ့် Specs အတိကျ သိချင်ကြတယ်။ (ToF က ထားလိုက်တော့)
ZESS with which Sensors?
စာဖတ်သူတွေရော ဘယ်လို ထင်လဲ? လက်ရှိ Android Flagship ဖုန်းတွေအားလုံး Megapixel Count ပိုများတဲ့ဖက်သွားနေကြသလို ဒီ Battle မှာ Samsung ဝင်လာတာကို S20 Series မိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်တယ်။
ဒီလိုပဲ OPPO FindX2 ၊ HUAWEI P40 Series တွေမှာ Sensor Size အားထားလာကြသလို အရင် Generation ထက် ပိုကောင်းလာစေဖို့ ဦးတည်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း Pixel Binning လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Quality တစ်ခုရအောင် ထုတ်ပေးနိုင်တယ် လက်ခံကြပေမယ့် Real-life မှာ ခြားနားမှုလေးတော့ ရှိနေဆဲပါ။
Sony အနေနဲ့လည်း 2020 အထိ 12MP နဲ့ပဲ သွားနေတာ ချီးကျူးစရာဖြစ်ခဲ့ရသလို အခုပေါက်ကြားလာတဲ့ Specification တိုင်းဆို စာဖတ်သူတွေ ဘယ်လိုမြင်လဲ?
All with Sony Sensors but..
Primary Lens ကို IMX557 Sensor အသုံးပြုထားပြီး Aperture f/1.7 24mm Lens ဖြစ်တယ်လို့ Leak လာတယ်။ Ultra-wide အတွက်ကို IMX363 Sensor သုံးထားပြီး f/2.2 16mm ရှိမယ်၊ နောက်ဆုံး Tele-lens ကတော့ ISOCELL S5K3T2 Sensor ကြီးပါ၊ Aperture f/2.4 70mm ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာတွေ ကွာဟသွားနိုင်မလဲ?
IMX 557 ကို နာမည်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရရင် ခက်ပေမယ့် မြင်သာအောင် ပြောရရင် Galaxy S20 ၊ S20+ မှာသုံးခဲ့တဲ့ IMX 555 နဲ့ Function ပိုင်း အတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့် 1/1.76” vs. 1/1.7” Sensor Size ရှိတဲ့အတွက် Xperia 1 II က ပိုကောင်းတယ်။
ဒီကောင့် Primary Sensor ကို ဘယ်ဖုန်းမှာမှ မသုံးဖူးသေးတဲ့အတွက် ပြောလို့ကမရသေးဘူး။ သေချာတာကတော့ S20 Series နဲ့ အနီးကပ်ဆုံးရှိနေပြီး Selfie ပိုင်းမှာလည်း ISOCELL S5K4H7 f/2.0 Sensor သုံးထားပါတယ်။
ဒီတော့ 2020 မှာ 1 II က အပြောင်းလဲတစ်ခု ဖန်တီးလာနိုင်တယ်။ ဖုန်းကို ဒုတိယသုံးလပတ် (ဧပြီ ၊ မေ ၊ ဇွန်) အတွင်းမှာ ရောင်းချသွားနိုင်ချေရှိတယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် ကိုရိုနာကြောင့် သတ်မှတ်ရက်ထက်လည်း နောက်ကျသွားနိုင်တယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေတာက ဘယ်သူမှ မလုပ်သေးတဲ့လမ်းကို ဖောက်သွားခဲ့သလို အသုံးပြုထားမယ့် Flagship Sensor က DxOMark အမှတ်ပေးဇယား အထက်ကို တက်ပေးနိုင်မလား? အများစုက ဒီအချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ကျပေမယ့် Professional ကတော့ 1 II ရဲ့ Capability ဘယ်လောက်ရှိမလဲကိုပဲ မျှော်လင့်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
HUAWEI ရဲ့ ဂန္ထဝင်မြောက် လက်ရာတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် P40 Series ထူးခြားချက်များ